ओलीको प्रश्न–एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? लिपुलेक, लिम्पियाधूरा, कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन नसकेको ?? – Maitri News
ओलीको प्रश्न–एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? लिपुलेक, लिम्पियाधूरा, कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन नसकेको ??
काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पूर्नरस्थापना भएयता पहिलो पल्ट विपक्षी दलका नेताको रुपमा संवोधन गरेका छन्। नेता ओलीले मंगलवार संसदमा सवा घण्टा संवोधन गरेका हुन्।
संवोधनका क्रममा नेता ओलीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे यो संयुक्त सरकारले के गर्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ओलीले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख नभएकाले एमसीसी के गर्नुहुन्छ जनताले जान्न चाहेको बताएका हुन्।
ओलीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कांग्रेसको अनुहार नदेखिएको धारणा राखे। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधूरा, कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधूरा, लिपुलेक, कालापानी भनेको समस्या हो भनेर राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै यो हाम्रो पवित्र भूमी भएकाले स्पष्ट रुपमा हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौ भन्नुपर्ने धारणा राखे।
संवोधनकै क्रममा ओलीले फेरि असाधारण जनमत साथ प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका छन्। उनले आफू परमादेशबाट नभई जनादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट पारे।
Previous Previous post: नारीलाई कमजोर सम्झिनेमाथि रिभेन्जको प्रहार
Next Next post: भजनकीर्तनमा दुई जनाको मृत्यु